CorelDraw X5 oo la qaadan karo bilaash | Abuurista khadka tooska ah
Lola curiel | | Design Graphic, Naqshadeynta Webka, General, Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka, Tababarada
Coreldraw waa barnaamij loogu talagalay naqshadeynta garaafka, qaabeynta webka,. Waxaan ku shaqeeyaa oo aan ku naqshadeeyaa sawirrada dulinka iyo dulinka, naqshadeynta sawirka iyo dib-u-hagaajinta sawirrada, oo leh astaamo aad ugu eg Photoshop.
Dhowr bilood ka hor isaga nooc cusub, Corel Draw X5 iyo a Buugga Isbaanishka ee loogu talagalay Corel Draw X5 maantana mahadsanid blog saaxiibkay ayaan helay Nooca la qaadan karo ee Corel Draw X5 soo dejiso bilaash ah.
Sidan ayaad ku qaadan kartaa barnaamij nashqadeyn wanaagsan barnaamijkaaga Pendrive ama dirawal adag oo banaanka ah kuna isticmaal kumbuyuutar kasta oo aad u isticmaali karto kaliya adoo ku xiraya USB-ga.
Ku soo dejiso dhamaystir xiriiriye | CorelDraw X5 la qaadi karo
1 Waa maxay CorelDRAW Graphics Suite X5?
2 Maxaa ku cusub CorelDRAW Graphics Suite X5 oo xusid mudan?
2.1 Waxqabadka hagaajinta
2.2 Hagaajinta la shaqeynta sawirada vector
3 Iswaafajin la hagaajiyay iyo karti ay ula wadaagaan isticmaaleyaasha kale
4 Sida loo soo dejiyo, qiimaha, tijaabada bilaashka ah ee loo yaqaan 'CorelDRAW Graphics Suite X5'
4.1 Ma ku heli karaa bilaash?
Waa maxay CorelDRAW Graphics Suite X5?
CorelDRAW Graphics Suite X5 waa sawir si fudud loo isticmaali karo iyo softiweer naqshadeynta garaafka ah oo bixiya qalab aan dhammaad lahayn si aad u soo saarto dhinacaaga ugu hal abuurka badan. Barashada sida loo isticmaalo waa mid aad u fudud oo noocaan cusubi waa mid si weyn waxtar u leh, oo la jaan qaadaya qalabka ugu weyn ee hadda jira oo kaa caawinaya inaad hesho natiijooyin xirfadeed oo dheeri ah.
Mid ka mid ah horumarka la taaban karo ee noocan cusub ah ayaa ah saxnaanta la gaadhay markii la matalayo midabada. Haddii aad la shaqeyneyso tusaale ka socda macmiil, oo leh naqshado hore oo gaar ah ama haddii aad u baahan tahay inaad u dirto mashruucaaga shirkadda daabacaadda, waxaad noqon kartaa mid gebi ahaanba deggan, midabada ayaa si sax ah u noqon doonta kuwa la doortay.
Maxaa ku cusub CorelDRAW Suugaanta Sawirada X5?
Waxqabadka noocyadan cusub ee 'CorelDRAW Graphics' wuxuu ilaa 6 jeer ka sarreeyaa kii hore, waxaad awoodi doontaa inaad abuurto oo aad u shaqeyso si hufan oo aad ku hesho natiijooyin wanaagsan iyadoo ay ugu wacan tahay hagaajinta codsiyada hadda si dhakhso leh u socda iyo kan cusub qalab.
Hagaajinta la shaqeynta sawirada vector
Natiijooyinka aad heli doontid markaad vector ku sawiraysid sawirrada 'bitmap' ee loo yaqaan 'CorelDRAW Graphics Suite X5' aad ayey uga wanaagsanaan doonaan mahadnaqa cusub ee PowerTRACE ™ ee ku saleysan AI (Sirdoonka Artifaktiga ah) Iska ilow pixels!
Iswaafajin la hagaajiyay iyo karti ay ula wadaagaan isticmaaleyaasha kale
Noocaan cusub waxaad awoodi doontaa inaad la wadaagto nashqadahaaga qofkii aad rabto adigoon ka baqaynin cilad ku saabsan iswaafajinta faylka. CorelDRAW Graphics Suite X5 hadda waxay taageertaa in ka badan 100 qaab oo ay ku jiraan:
Waxa kale oo ay ku habboon tahay naqshadeynta garaafka ugu weyn iyo softiweerka tafatirka sida Adobe Illustrator ama Adobe Photoshop
Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa macaamiisha iyo dadka aad isla shaqeysaan oo aad ku martiqaadi kartaa inay dib u eegaan nashqadahaaga daruuraha, xitaa way ka faalloobi karaan oo ay si toos ah ugu sharxi karaan CorelDRAW illaa CorelDRAW.app.
Sida loo soo dejiyo, qiimaha, tijaabada bilaashka ah ee loo yaqaan 'CorelDRAW Graphics Suite X5'
Rukun-qorista loo yaqaan 'CorelDRAW Graphics Suite X5' ma ahan mid rakhiis ah, waxay ku kacdaa qiyaastii 350 euro sanadkii. Si kastaba ha noqotee, bogga rasmiga ah wuxuu bixiyaa nooc tijaabo ah oo 15-maalmood ah oo loogu talagalay Windows ama Mac haddii aad rabto inaad bilowdo inaad la xiriirto qalabkan naqshadeynta cajiibka ah.
Ma ku heli karaa bilaash?
Bogagga qaarkood sida kan aan kaaga tago khadadka, waxaad ka heli doontaa xiriiriyeyaal si aad u soo dejiso CorelDRAW Graphics Suite X5 bilaash. Ku rakibisteeda waa fududahay, raac talaabooyinka la tilmaamay:
Ku soo dejiso xiriirka
Furo oo soo saar
Fur CorelDRAW Graphics maamul ahaan si aad u bilowdo
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » CorelDraw X5 la qaadi karo oo bilaash ah